Daawo Sawirada '' Muqdisho oo buux dhaaftay iyo qul qulka Barakacaaysha oo Wali Muqdisho kusoo qul qulaya - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa Wali Magaalada Muqdisho soo gaaraya boqolaal Qoys oo dib uga soo barakacaya Deegaanada markii hore loo barakacy ee Duleedka Magaalada Muqdisho kadib markii dadka ku dhaqan Deegaanadaasi ee lasoo daristay cabsidii ugu xooganereed mudo sanooyin ah.
Markii aad gaarto Marinka ee dadkan isticmaalayaan ee ah Wadada Muqdisho iyo Afgooye xariirisa ayaa ku arkaysaa Qoysas badan oo kasoo baracakaya Duleedka Magaalada Muqdisho kuwaa oo qaarkood baabuur wata oo kusoo guuraya iyo kuwa cagtooda maalaya kadib markii awoodi waayeen qarashaadka baabuurta lagu kireesto.
Xaafadaha ku yaala Magaalada Muqdisho ayaa hada buux dhaafay kadib markii ee kusoo barakeen dadweyne hor leh iyadoona hada dadku isasa saaran yihiin culeys badana isku qabaan.
Qaar kamid ah Dadka Muqdisho soo gaaray ayaa iska deegaansaday dhul bur bursan ama guryo jajabsan inta ee ka helayaan goobo kale ee deegaansadaan ama ee dib u habeesanayaan guryahooda Dagaaladii ku bur buray.
Barakacan ayaana noqonaya kii ugu balaarnaa ee saameeyaan dadkii markii hore Muqdisho ka barakacay in Sanado ah ee degnaayeen.